အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက် Archives | Page 45 of 48 | Frontier Myanmar
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ရင်ရော ငြိမ်းချမ်းရေး မြန်မြန်ရလာနိုင်မလား
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံဖွင့်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- စိုးသန်းလင်း စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၆၈ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ အင်န်အယ်လ်ဒီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လာမယ့်.
တပ်မတော် ရပ်တည်ချက် ဘာကြောင့် ပြောင်းသွားသလဲ
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျရောက်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၂၀၁၅ ခု နှစ်ကုန်ခါနီးမှာတော့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် တစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းဝင် စကားတစ်ခွန်း ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီး နောင် ပေါ်ပေါက်လာမယ့်.
ကျပ်ငွေကို မှားယွင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
မြန်မာအစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ကနေတစ်ဆင့် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်မှာ နိုင်ငံအတွင်း ဒေါ်လာဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို တားမြစ်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီငွေကြေး မူဝါဒကြောင့် မြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုး လျော့ကျမှုကို စိုးရိမ်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဖို့ မျှော်လင့်ချက်အနည်းငယ် ပြန်လည်တိုးမြင့်လာခဲ့တယ်။ ငွေကြေးလဲလှယ်မှု ပြဿ နာတွေက.
Frederick Eck ရေးသားသည်။